Okudumile e eminyakeni Soviet izimonyo ifektri "Freedom" Namanje eyaziwa kahle kakhulu ku CIS, futhi abesifazane abaningi namanje ukusebenzisa le mikhiqizo. Ngaphambilini, le zazingaphucukile amashubhu waqiniswa umklamo elula, kodwa eminyakeni yamuva inkampani kanye nemikhiqizo yayo zishintshile.
Foundation of ifektri "Freedom" (yayo ihlaya obizwa nangokuthi BB-ayisikhilimu Soviet-isitayela) - ithuluzi ethakazelisa kakhulu. Nakuba, uma kuphela ngoba, isibonelo, ukwakheka Izıhlabane kumafilimu Soviet muhle ngokwanele. Hhayi induna olulodwa noma tindilinga amnyama, thina awuboni phambi kwamehlo abaculi. Ukuze okuthwebula ngaso sonke isikhathi futhi sasebenzisa lokhu isisekelo. Izithombe nenkambiso yamaSoviet yize babethatha esithile ngokuqondile, kodwa ibala babenesifiso yamukeleka, kanye isikhumba - kungekho ukukhubazeka ebonakalayo. Manje lenqwaba abesifazane uyalisebenzisa yini leli thuluzi futhi imaski nemihuzuko nemihuzuko. Ngaphezu kwalokho, unikezwa sengqondo baseSoviet ukuthi abenze noma ikhwalithi yemikhicito, kuthathwa ngokuthi isisekelo imboni "Freedom" ihambisana namazinga izinga isikhathi, futhi kuke kwaba ezingeni eliphezulu kakhulu ezaziwayo.
Izimonyo ifektri equkethe isethi ephelele skincare, ukunakekelwa umzimba, izinwele namazinyo. Kuze kube namuhla, ethandwa mhlophe okhilimu kanye ikhukhamba kanye parsley, wokuxubha, imoto kanye insipho, kanye massage, amafutha, antivovozrastnye izimali kanye isisekelo.
"Freedom" - embonini, nesebenzela noma eyishumi eyodwa. Kuyo yonke le minyaka ukhona, ososayensi lokhu inhlangano yezimonyo isungule izindlela eziningi eziyingqayizivele, okuyinto zihlukene ngenjongo esebenzisa izakhiwo. Yonke imikhiqizo ezenziwe ngezinto imvelo nobungane zemvelo.
Ngo womshini izimonyo, kule mboni isebenzisa izithelo acid, ezikhishwe of amakhambi ehlukahlukene, amafutha odabuka yemvelo, imikhiqizo bee, provitamins, mithambo ine-elastin, collagen liposomes, micronutrients ezihlukahlukene eziwusizo kanye nezinye izithako zemvelo. Leli qiniso ihlukanisa mikhiqizo kusuka nezinye brand eziningi, nakuba yena kummeleli ongaphakeme intengo isigaba.
Esikhathini sethu, sasenza ukwethulwa ezintsha okuhloswe ngayo ukwenza ngcono izinqubo zokukhiqiza kanye, yebo, izimonyo. Minyaka yonke, uhla imikhiqizo landa ngamaphesenti angu amathathu, futhi emikhiqizo eminingi patent eyatholakala.
Ithoni ukhilimu ifektri "Freedom 'nayo olusha. Waphinda wathola abathengi babo. Futhi ake ukubuyekezwa ngalokhu thuluzi ezahlukene, umkhiqizo wathola injongo yaso emakethe izimonyo funa. Othile uthi ithuluzi uyisidala engenamsebenzi osekuyisikhathi eside waphila isikhathi eside ukudlula kwakhe, kodwa kukhona okuhlaziya omuhle. Ithoni ukhilimu ifektri "Freedom" wathandwa izinhliziyo abesifazane abaningi abaphila eminyakeni Soviet. Futhi lokhu kuyaqondakala, ngoba ngaphambi kokuba kube nokushoda lezo zimali. Kodwa namuhla - kanye nabesifazane asebekhulile - ke uthi ikhona ukuze abantu abasha futhi kuqinisekisa ikhwalithi yawo kuphela.
Nokho, amazwi abakwazi ukunikeza ukuhlolwa egcwele lo mkhiqizo. Wonke umuntu ekhetha indlela ukunakekelwa, okuyizinto ehlelelwe more kuye nekghono, futhi intengo.
Induna ezingabantu: kanjani ukuqeda?
Unesitshalo ARDISIA: ukunakekelwa ekhaya, ikakhulukazi ukutshala kanye nezincomo
"Minds Criminal": impendulo mayelana show
Novice: kanjani ukuthatha BCAA 5000 Powder e powder noma amaphilisi?